आइतवार दिनभर के भयो ? घटनाक्रम ११ – bampijhyala.com
Home > समाचार > सरकार गतिबिधी > आइतवार दिनभर के भयो ? घटनाक्रम ११
५ पुष २०७७, आईतवार २२:२३ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । कार्यकाल २ वर्ष र २ महिना बाँकी छँदै नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारले गरेको सिफारिश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेपछि देश अब मध्यावधि निर्वाचनमा होमिएको छ । सरकारले संसद् विघटन गरेपछि दिनभर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुनुपूर्व नै केही मन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिश हुन लागेको पूर्व संकेत पाएको बताएका थिए । केही मन्त्रीको असहमतिको बाबजुत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशका लागि संसद् विघटन गर्ने निर्णय सुनाए ।
संसद् विघटनको सिफारिश लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगे । शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबीच झण्डै डेढघण्टा छलफल भयो । यसबीचमा संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध भयो ।
नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ताका लागि बालुवाटार पुगे । प्रचण्डले संसद् विघटनको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे । तर ओली पछि हटेनन् । दिउँसो १ बजेका लागि नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको थियो । बैठक ढिला भयो ।
दिउँसो साढे १ बजे
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसी संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्यो । संसद् विघटन विरुद्ध ४ बुँदे निर्णय गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिको संरक्षणका लागि अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव भयो । कांग्रेस जिल्ला समिति काठमाडौंद्वारा बानेश्वरमा सभा आयोजना गर्ने र गगन थापाले सम्वोधन गर्ने तयारी भयो ।
दिउँसो साढे २ बजे
बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डबीच छलफल चलिरहेको समयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको विज्ञप्ति आयो । संसद् विघटनको सिफारिश फिर्ता हुने कतिपयको आँकलन विपरित राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी २०७८ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने निर्णय सार्वजनिक भयो ।
दिउँसो साढे ३ बजे
मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राईलाई नियुक्त गरेको सूचना बाहिर आयो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार बसेको परिषद् बैठकले राईलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको निर्णय बाहिरियो ।
सवा ४ बजे
प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको खुलासा भयो । बिहान साढे १० बजेको समयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहले हस्ताक्षर सार्वजनिक गर्यो । यही सूचनाका आधारमा हतार हतार संसद् विघटनको निर्णय भएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
साढे ४ बजे
नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका ७ जना मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरे । आफूहरुले संसद् विघटन रोक्नका लागि प्रयास गरेपनि सफल हुन नसकेको भन्दै वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, बिना मगर, रामेश्वर राय यादव, योगेश भट्टराइ र घनश्याम भुसालले राजीनामा गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेर निर्वाचनको तयारीबारे लाग्न निर्देशन दिए । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले दुई चरण भन्दा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएका थिए । साथसाथै सुरक्षा प्रमुखहरुसँग छलफल गरेर चुनावी तयारीमा लाग्न निर्देशन दिए ।
साढे ५ बजे
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीको अनुपस्थितिमा प्रचण्ड नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठक बस्यो । संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय भयो । संसद् विघटन गराएर कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पारेको भन्दै ओलीविरुद्ध अनुशासनको कारवाही गर्न केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भयो ।
साझ ६ बजे
नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूबीच कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बसी संसद् विघटन विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्ने निर्णय भयो । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा भोलि फेरि छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल ५ पुष २०७७, आईतवार २२:२३
सम्झनामा जेठ ३ ५ पुष २०७७, आईतवार २२:२३
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? ५ पुष २०७७, आईतवार २२:२३
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव ५ पुष २०७७, आईतवार २२:२३
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक ५ पुष २०७७, आईतवार २२:२३